Hay’adda Amnesty oo soo ban dhigtay tirada dad rayid ah oo lagu dilay duqeymaha AFRICOM |
Hay’adda Amnesty oo soo ban dhigtay tirada dad rayid ah oo lagu dilay duqeymaha AFRICOM
Baaritaan ay sameesay hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in diyaaradaha militariga Mareykanka ay sadax ruux oo shacab ay ku dileen duqeen gobolka Shabeellada Hoose duqayn halkaasi ka fuliyeen bishii March ee sanadkan.
Amnesty ayaa sheegtay in bartil maamaydka weerarka uu ahaa al-Shabaab balse dad beeralaeey ah lagu laayay iyadoo aanan waxa cadeen ah loo helin in dadkaasi ay xiriir laleeyihiin dagaalamayaasha al-Shabaab.
Hawlgalka Mareykanka ee qaaradda afrika ee Africom ayaa sheegay in ugu yaraan mid kamid ah sadaxda ruux ee weerarkaasi ku dhimatay uu ahaa dagaalame balse Amnesty ayaa sheegaysa in hawlgalka uu ku guul dareestay in uu xiriir lasameeyo ehelkiisa si looga helo faafaahin dheeraad ah. Ninkaas ayaana hay’adu ku warantay in ifka uu kaga tagay 19 caruur ah.
“Africom uma muuqato mid ka war heesa xaqiiqatan cida ku dhimanaysa iyo kuwa dhaawacmaya weeraradooda Soomaaliya” ayaa lagu yiri warbixinta hay’adda Amnesty International.
18’ki March 2019 intii u dhaxeesay 3pm illaa 4pm diyaaradaha Mareykanka ayaa beegsaday gaari Toyota ah oo marayay meel u dhaw deegaanka Abdow Dibile, oo 5km u jira degmada Afgoye ee gobolka Shabeelada Hoose.
Weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay sadax ruux oo beeralay ah oo la sheegay in waqtigaasi ay kusoo jeedeen guryahooda oo ku yaalo deegaanada Leego iyo Yaaq Bariwayne.
Amnesty International ayaa faah faahin dheeraad ah oo macluumaadkani ku saabsan lawadaagtay Africom bishii August, balse hawlgalka Africom ayaa ku adkeestay in uu ka laabto sheegashadoodi ahayd in weerarka ay ku dileen al-Shabaab.
Amnesty ayaa diiwaan galisay lix kiis oo diyaaradaha Mareykanka la aaminsan yahay in ay ku dileen dad shacab ah, iyadoona tiradooda guud ee dadka shacabka ah ee ku dhintay duqeemahaasi ku sheegaty in ay yihiin 17 ruux oo dhimasho ah iyo sideed dhaawac ah.